Uyila njani ilogo elungileyo, iimpawu ezisisiseko | Izidalwa ezikwi-Intanethi
I-logo eyilwe kakuhle yile ibonelela ngexabiso kwiinkampani, kuba ibonisa amaxabiso kunye nefilosofi yezi zinto phambi kwabaxumi babo kunye noluntu ngokubanzi, ikwavumela ukuba bazihlule kukhuphiswano kwaye Unophawu kunye noyilo olulungileyo uthanda ukuPhawuwa kweNkampaniOko kukuthi, iqela lezinto ezimelwe ngokwasengqondweni, nokuba linento yokwenza okanye ingqondo, yeyiphi okanye ngaphezulu enayo malunga nenkampani okanye uphawu.
Njengenyathelo lokuqala kunye ukufezekisa ilogo efanelekileyo elungelelaniswe neemfuno zorhwebo, abathengi kufuneka banxibelelane ngokweenkcukacha kwi-graphic design studio nganye yeempawu ezinazo inkampani yabo, ezo zentengiso ezijolise kuyo kunye nomyalezo abafuna ukuwudlulisa. Emva koko, umyili uya kuqhuba nokhuphiswano, kwaye ke uya kuqala ngenkqubo yokwenza i-logo.
1 Amanyathelo okuyila ilogo elungileyo
1.1 Umbono obonakalayo
2 Zeziphi izinto ezikhethekileyo ezinazo ilogo elungileyo?
2.4 Uhlobo lokuchwetheza
2.5 Kufuneka ibhetyebhetye
Amanyathelo okuyila ilogo elungileyo
Kwinkqubo yokuqonda Izinto ezahlukeneyo ezibonwayo ziyabandakanyeka, ezinje ngenkcubeko kunye neempawu zomntu ngamnye.
Ukusukela ekuqaleni ingqondo iyazibona iimilo oluthanda uluvo olufanayo kwimemori; emva koko imibala ivuselela iimvakalelo kwaye ekugqibeleni umxholo ngolwimi oya kuthi enze isigqibo.
Nazi ezinye zeempawu eziza kukunceda ukuba uphucule uphawu lwakho.
Ngaba uyafuna ukufunda ukuba ungayenza njani i-logo ngobuchule? Ewe ngoku kunokwenzeka ukubulela ku le khosi ekwi-intanethi Ngexabiso elingakholekiyo lexesha elimiselweyo> Fikelela kwikhosi
Zeziphi izinto ezikhethekileyo ezinazo ilogo elungileyo?
Ilogo kufanelekile, ngohlobo lokuba ivumele ukuqaphela uphawu oluyimeleyo ngokuyijonga, kuya kuba lula ukuyikhumbula, ukuyidibanisa kunye nokuzala kwakhona.
Ukwenza ukuveliswa kwelogo kube lula ngeendlela ezahlukeneyo zokuprinta okanye ngokusetyenziswa okwahlukileyo kungakhathalekile ukuba zihamba ngeselfowuni okanye zikrini, kuya kufuneka ukufaka umbala kulula njeOko kukuthi, sebenzisa imibala emi-2-3 kuphela.
Kuya kufuneka uphephe ukusebenzisa isithunzi okanye iziphumo zegradient.
Ngokutsho kweRAE, into engalibalekiyo ibhekisa “ufanele ukukhunjulwa", Eya kuguqulela kuyilo lwe logo njengokugcina kuphela into eyimfuneko ngokwenene, ukuze abathengi kunye noluntu ngokubanzi bayiqonde.
Ukuthathela ingqalelo ukuba ubunye kunye nokuqala kunokwenza logo.
Umbala unokuvelisa iimvakalelo, ukwaliwa okanye umtsalane ngokwemo yeemvakalelo, ubuntu kunye nemeko yenkcubeko yomntu ngamnye.
Kwangokunjalo, iphembelela kakhulu ukufunyanwa kwemveliso enye, yiyo loo nto kunjalo kuya kufuneka ufunde ngononophelo isigqibo ngombala oya kuyisebenzisa xa usenza ilogo, kuba umbala wenza ulwazi malunga nophawu oluvumela ukuba lwaziwe kwaye lukhunjulwe ngaphakathi kwintengiso kwaye lukwakhuthaza umahluko, ekufuneka uhambelane nomsebenzi kunye nefilosofi yenkampani.
Ukukhetha kunye nokusetyenziswa ngokuchanekileyo kwepeyipografi yelogo kuya kuxhomekeka ekubeni uluntu luyayibona ngendlela engcono. umyalezo ofuna ukuwudlulisa uphawu. Ke kufuneka ifundeke ngokupheleleyo, ke kufanele ukuba ibenobungakanani obufanelekileyo bomzimba, ithambeka, ubukhulu kunye nombala.
Ndiyathetha Kusetyenziswa iifonti ezi-2 ezahlukeneyo eziphezulu Xa usenza i-logo, kungenjalo inokudideka eluntwini, kwakhona, ubungakanani bokubhaliweyo kufuneka bufundeke nokuba bubungakanani obuncinci kakhulu, ke kuya kufuneka ukhethe ifonti enokuziqhelanisa neefomathi ezahlukeneyo.
Imelwe kukuba i-logo enokulungeleka ngokulula kwaye iyabonakala ngaphandle kobungakanani bayo, inkxaso okanye usetyenziso.
Oko kukuthi, kufanele ukuba isetyenziswe kokubini kwintengiso enkulu kwibala elingaphambili lesakhiwo okanye njengentengiso kwipeni encinci kwaye kufuneka isebenziswe kwiwebhu. Ke ezona zicetyiswayo zezona iilogo zevectorIilogo eziluncedo kakhulu onokuzisebenzisa, kodwa siza kuchaza ukuba ngcono kwelinye inqaku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Uyila njani ilogo elungileyo, amanqaku asisiseko
Ewe, umbulelo olungileyo, kuninzi okwenziwe ngelaphu ukusika, ngumcimbi onzima kakhulu, apho amanqaku amaninzi angena khona, njengokuphatha ubukhulu, ubuhle, ukuhanjiswa kwezinto, ulawulo lwazo oluninzi, abanye abaninzi bangena